Tue, May 26, 2020 at 6:43pm
बुधबार, ११ आषाढ २०७६,	आहाखबर	1.34K
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ पारित भएको छ । उक्त नीतिमा आयुर्वेदको विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन भित्र्याउने, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, देशभित्र र बाहिरका सबै नेपालीलाई समेट्ने लगायतका २५ नीति रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले आज मात्र मन्त्रालयमा नीति पारित भएको जानकारी आएको बताइन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत महिनामा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ पारित भएको छ, आज मन्त्रालयमा पत्र आयो। तर नीति पास भएको मिति भने जेठ १० गते छ। मन्त्रालयमा पत्र आज मात्र आएको हो।’
संघीयता लागू भएपछि स्वास्थ्यको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य नीति बनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले यो नीतिले स्वास्थ्य सेवासुविधाको विकास र विस्तारमा मद्दत पुग्ने बताए।
संघीयता अनुरुप नीति बनाइएकोले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारद्धारा पारित २५ स्वास्थ्य नीति :
२५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिने छ।